I-Google ikhiphe ikhodi yomthombo yeLyra, i-Android audio codec | Kusuka kuLinux
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule i Abathuthukisi beGoogle bakhululiwe nge-blog post abayithathile isinqumo sokwenza umthombo ovulekile weLyra. ILyra isuselwa ekufundeni komshini ukunika amandla izingcingo zezwi ezisezingeni eliphakeme ezimweni eziphansi zomkhawulokudonsa.
Ngalokhu lokhu izinzuzo futhi ivumela abanye onjiniyela ukuthi bondle izinhlelo zabo zokusebenza ukuxhumana nokuthuthukisa uLyra ezindaweni ezintsha.
Isisekelo sezinhlelo zokusebenza zemidiya amashumi eminyaka, ama-codec anike amandla izinhlelo ezinamandla zomkhawulokudonsa ukuthumela idatha kahle.
Kanjalo, ukuthuthukiswa kwe-codec, kokubili ividiyo nomsindo, kuveza inselelo eqhubekayo- Nikeza ikhwalithi ephakeme kakhulu, sebenzisa idatha encane, futhi unciphise ukubambezeleka kokuxhumana kwesikhathi sangempela.
Yize ividiyo ingabonakala idla umkhawulokudonsa omningi kakhulu kunomsindo, ama-codecs wesimanje wevidiyo angathola amazinga aphansi kunamanye ama-codec wokukhuluma asezingeni eliphakeme asetshenziswayo namuhla.
Ukuhlanganiswa kwe Amakhodekhi wezwi namavidiyo aphansi angaletha isipiliyoni sokushaya ikhwalithi ephezulu yevidiyo ngisho nakumanethiwekhi we-bandwidth aphansi. Kodwa-ke, ngokomlando, ukwehla kwesilinganiso esincane se-codec yomsindo, isignali yezwi ayiqondakali kangako futhi irobhothi kakhulu.
Futhi, ngenkathi abanye abantu benokufinyelela kwinethiwekhi ye-broadband yekhwalithi ephezulu engaguquguquki, leli zinga lokuxhuma alikho endaweni yonke, futhi nabantu abahlala ezindaweni ezixhumeke kahle kwesinye isikhathi babhekana nokuxhunywa kwenethiwekhi okungekuhle, ukuxhumana kwenethiwekhi okungekuhle, nokuxhuma.
Ukuxazulula le nkinga, I-Google idale i-Lyra, ikhodekhi yokukhuluma esezingeni eliphakeme, ene-ultra-low-bit okwenza ukuxhumana ngezwi kutholakale noma kumanethiwekhi ahamba kancane.
Ukuze wenze lokhu, I-Google isebenzise amasu wokufaka amakhodi wendabuko ngenkathi isebenzisa ukuthuthuka ekufundeni komshini ngamamodeli aqeqeshwe ngaphezu kwezinkulungwane zamahora wedatha ukudala indlela entsha yokucindezela nokudlulisa amasiginali ezwi.
Ikhodi kaLyra ibhalwe ku-C ++ ngejubane, ukusebenza kahle nokusebenzisana, futhi isebenzisa uhlaka lweBazel nge-Abseil nohlaka lweGoogleTest lokuhlolwa okuphelele kweyunithi.
I-Basic API inikeza isikhombimsebenzisi sokufaka ikhodi nokukhipha ikhodi ezingeni lephakethe kanye nefayela. Ithuluzi lamathuluzi lokucubungula amasiginali eliphelele nalo liyanikezwa futhi lifaka phakathi izihlungi ezahlukahlukene kanye nokuguqula.
“Isicelo sethu sesampula sihlangana ne-Android NDK ukukhombisa ukuthi ingahlanganiswa kanjani ikhodi yomdabu kaLyra kuhlelo lwe-Android olususelwa kuJava. Siphinde futhi sinikeze izinsimbi ze-vector kanye neziqu zokulinganisa ezidingekayo ukuqhuba iLyra, ”kusho uGoogle. Lokhu kukhishwa kunikela ngamathuluzi adingekayo konjiniyela wokufaka ikhodi nokunquma umsindo ngeLyra, elungiselelwe ipulatifomu ye-Android ARM engama-64-bit, nenguqulo yeLinux.
Izici zihlukaniswe zibe yigagasi kusetshenziswa imodeli yokukhiqiza. Amamodeli wokukhiqiza awuhlobo olukhethekile lwemodeli yokufunda komshini efanelekile ukuphinda uthole ifomathi yomsindo ephelele evela kwinani lemisebenzi elinganiselwe.
Ukwakhiwa kukaLyra kufana kakhulu namakhodekhi omsindo wendabuko, obe ngumgogodla wezokuxhumana nge-Intanethi amashumi eminyaka. Ngenkathi lawa ma-codec wendabuko asuselwa kumasu wokucubungula amasiginali edijithali, uLyra uhlala ekhonweni lemodeli yokukhiqiza yokwakha kabusha isignali yenkulumo esezingeni eliphakeme.
I-Google isebenzise i-Lyra kuhlelo lwayo lwamahhala lokushayela ividiyo nge-Duo futhi ithe yenza ikhodi ivuleke ngoba icabanga ukuthi ingahle ilungele ezinye izinhlelo zokusebenza.
I-Google ikholelwa ukuthi kunezinhlelo zokusebenza eziningi uLyra angahle azilungele, noma ngabe kungokufaka kungobo yomlando izwi elikhulu, ukonga impilo yebhethri, noma ukunciphisa isiminyaminya senethiwekhi ezimweni ezimatasa.
"Silangazelela ukubona ubuhlakani obuchaza umphakathi ovulekile osebenza kuLyra ukuletha izicelo ezinamandla futhi ezihlukile," kusho uGoogle.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Google ikhiphe ikhodi yomthombo ye-Lyra, i-codec ye-Android audio